Usefakwe ohlwini lwabazoqeqesha iBafana owayeqeqesha eNgilandi | News24
Usefakwe ohlwini lwabazoqeqesha iBafana owayeqeqesha eNgilandi
Cape Town – Kubikwa ukuthi usefakwe ohlwini olufinyeziwe lwabaqeqeshi okuzokhethwa kubo ozoqeqesha iqembu lesizwe, iBafana Bafana, lowo owayengumqeqeshi weqembu lesizwe laseNgilandi.
Ngokombiko we-website yeKickOff, uHodgson, uzoba ngabanye babaqeqeshi okuzoxoxwa ngabo uma ngabe iSouth African Football Association (SAFA) isihlangana ukubheka ukuthi ubani umqeqeshi omusha ongase aqokwe.
OLUNYE UDABA: Kumisiwe ukuthungathwa komqeqeshi omusha weBafana
Kubikwa ukuthi iSAFA isithole inqwaba yezicelo zomsebenzi wokuqeqesha iBafana, kodwa kubukeka sengathi le nhlangano maningi amathuba okuthi igxile kubaqeqeshi abanamagama amakhulu, nokuhlanganisa nalo mqeqeshi owayeqeqesha i-England.
U-Hodgson wasula njengomqeqeshi we-England ngoJuni ngonyaka odlule ngemuva kokushaywa yi-Iceland ng-2-1 ku-Euro 2016 esigabeni samaqembu angu-16 eFrance.
UHodgson akamusha eNingizimu Afrika njengoba eke waqeqesha iqembu elalidlala emdlalweni owawuhlelwe yiFIFA wobungani.
Ngaphezu kwalokho kubikwa ukuthi lo mqeqeshi uhlale evakasha kuleli uma eseholidini.
Uma kungukuthi imibiko eqagula ukuthi kungase kuqashwe uHodgson iyiqiniso, njengokombiko weSowetan Live, iSAFA kuzodingeka ukuthi ikhiphe imali elinganiselwa ku-R50m ngonyaka ukuze ithole lo mqeqeshi.